काँचका पर्दाभित्र अनरिपोर्टेड स्टोरीज | BLOGSTREET
Posted on July 22, 2009 by Roopess	कथा
नमस्कार म‍‍…। ८ बजेको समाचार बुलेटिनमा स्वागत छ । ”सर्वप्रथम आजका मुख्य मुख्य समाचार…” यो उनको पहिलो वाक्य हुन्थ्यो र त्यति भनेपछि म उनलाई खासै सुन्दीन थिएं । किनकि मलाई उनले भन्ने प्राय सबैजसो कुरा थाहा हुन्थ्यो । उनी खासमा एउटा टेलिभिजन च्यानलमा समाचार भन्थिन् । हेर्दामा साह्रै राम्री आवाजमा एक किसिमको दम्भ तर बोली सूनीरहूं जस्तो मिठो । उमेर म भन्दा कम्तिमा ७-८ वर्ष जेठी सायद । म त्यतिबेला १९ वर्ष ८ महिनाको मात्र थिएं हुंला । त्यतिबेला टिभी स्टेशन धेरै थिएनन् र उनलाई नहेर्ने र नचिन्ने कमै थिए । त्यतिबेला एफ एम रेडियोको दबदबा रहेकै बेला म पनि कुनै एउटामा समाचार शाखामै काम गर्थें र रेडियो सुन्नु टिभी हेर्ने कामै हुन्थ्यो । मैले नचिन्ने नहेर्ने त कुरै थिएन । एक किसिमले टिभी प्रतिको आकर्षणले पनि टिभी हेरिन्थ्यो नै त्यसमाथि तिनको समाचार हेर्दा आफैंले समाचार भनिरहेको जस्तो लाग्थ्यो ।
रिपोर्टर्स क्लब अगाडिको साइबरमा म के कामले पसेको थिएं निस्किन लागेको बेला तीनलाई त्यहि साइबरको अर्को कुनामा घोत्लिरहेको देखें । आफ्नै कोहि मान्छे जस्तो लाग्यो । ”आराम हुनुहुन्छ ?” फ्याट्ट सोधिहालें । कम्युटरमा रोयटर्सको साइट खोल्दै गरेकी उनी अल्मलिइन् । मलाई हेर्दै आरामै छु को संकेत गरीन् ।
आवाज निस्केन क्यार ।
”हिजो बोलाउंदा किन नबोल्नुभाको ?” अनि के बुझिन् कुन्नि “अं अलिकति व्यस्त थिएं यादै भएन ।” त्यसपछि अल्मलिने पालो मेरो भो । मैले त जिस्केर टेलिभिजनमा देखेको कुरा लिएर त्यसो भनेको थिएं । मेरो अनुहार अल्मलिएको देखेर दंग परिन् । के भनूं भनूं भयो । ”अं सांच्ची नाम के रे तपाईंको ?” ठाडै सोधिन् तर मलाई सजिलो पारिन् ।
”म रुपेश ” भनेर मौकाको फाइदा उठाएर एफएममा काम गर्ने कुरा पनि भनें । मुस्काएर सुनिरहिन् । त्यतिन्जेल मैले सधैं उनलाई टेलीभिजनमा हेर्ने गरेको र मलाई उनको प्रस्तुती पनि राम्रो लाग्ने कुरा पनि बताउन भ्याएं । खुशी भएको जस्तो भाव देखाईन् । राम्री हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्न अप्ठ्यारो लाग्यो दिदीको उमेरको मान्छेलाई म फुच्चेले कसरी भन्नु “लौ त म हिडेँ पछि भेटूंला । तपाईंसंग भेट्दा निकै खुशी लाग्यो ।” मैले निस्किने तरखर गरें । ”कहांसम्म जाने नि ?” लौ संगै हिँड्न पाइने भो भन्दै सिँहदरबार जाने बताएं । ”म पनि त्यतै हॊ त्यहां एकजना संग भेट्नुछ संगै जौं न !” के खोज्छस् .. भने जस्तै भयो ।
टिभीमा देख्दा जस्ती देखिन्थिन् त्यो भन्दा धेरै फरक तर झनै बढी राम्री चम्किला काला काला आंखा । दाया बाया हेर्दा चम्किला तारा आकाशमा कुदॆजस्तो हेरीरहूं जस्तो । टिभीमा आउंदा साडीमा हुन्थिन् त्यो दिन फिका निलो जीन्समा सेतो कुर्ता सेतै कन्भस्र । टाउकोमा कालो महंगो जस्तो देखिने चस्मा । घांटीमा चांदाीको मसिनो सिक्री टाढाबाट नदेखिने बरु नोकियाको ११०० मोडलको ह्याण्डसेट टड्कारो देखिन्थ्यॊ घांटीमै झुण्ड्याइएको ।
पहिलो पटक भेटेको केटोसंग उनले मजैसंग गफ गरिन् । म हंसीलो पनि फुर्तिलो पनि हेर्दा पनि हेर्न हुने नै खालको । भाई जस्तो लाग्यो कि, पुतलीसडकदेखि सिँहदरबारको रेडियो नेपालको एफ एम स्टुडियो पुग्न मैले कहिल्यै गाडी चढेको थिइनं त्यो दिन ट्याक्सीमा गइयो । दक्षिण गेटमा पुगेर ४५ रुपैया तिर्दासम्म तिनले मसंग धेरै कुरा खोतलीन् रेडियोमा एक वर्ष भयो काम थालेको घरमा ५ जनाको परिवार गलफ्रेण्ड छैन अनि तलब ३४०० सम्मका सबै कुरा भनी टोपलें । खै कसरी हो !
गेटदेखि संसद सचिवालय अगाडिसम्मको यात्रामा उनले “कहिलेकाहीं फोन गर्नु ल !” भन्दै आफ्नो मोबाइल नम्बर दिइन् । मैले पनि “मेरो समाचार सुन्नु होला नि !” भनें । मोडमा पुगेपछि एकचोटि फर्केर हेरें । उनी कतै गायब भइसकेकी थिइन् ।
रेडियोमा काम सुरु गर्दाको अनुभव उत्साहपूर्ण थियो । समाचारमा काम गर्दाको अनुभव त झनै । तर सुरुवातका दिनजस्तो सधैं कहां हुनु । रेडियोमा समाचार भन्ने भन्ने वित्तिकै तलब त निक्कै होला भन्थे साथीहरु । म भर्खर कलेज पढ्दै गरेको मान्छेलाई ३४ सय रुपैया त ठिकै थियो तर साथीहरुलाई भन्न असजिलो लाग्थ्यो । त्यसमाथि एफ एममा माथिल्लो तहकाहरुले गर्ने व्यवहार काम गर्ने वातावरण आदि कुराका बारेमा मनमै भएपनि गुनासा त छंदैथिए । हुन पनि रेडियोमा वर्षौंदेखि काम गरिरहेका साथीहरुको पनि जागिर आज हो कि भोलि हो भन्ने ढुकचुक हुन्थ्यो । रेडियोमा मलाई सुन्ने आम श्रोता भेट्दा भने अर्कै आनन्द हुन्थ्यो । टेलिभीजनमा काम गर्ने धोको भने छंदैथियो । उपयुक्त समय र अवसरको प्रतिक्षा थियो । टिभीमा काम गर्नेहरुसंग भेट हुंदा उनीहरुको अनुभव सुन्न खुब रहर लाग्थ्यो । तर उनीसंग मैले केहि सोधिनं । उनैले बरु मेरोबारेमा धेरै सोधिन् । मेरो काम गर्ने उत्साह देखेर दंग परीन् । मैले टेलिभीजनमा काम गर्ने आफ्नो इच्छाको बारेमा पनि बताएं । उनले केहि भनिनन् । सुनीन् मात्र । अचम्म मानिन् क्यार बरु पहिलो भेटमा नै सबैजसो कुरा खुलस्त बताउंदा ।
महिना दिनपछि बिहान ६ बजेको समाचार सकेर कन्ट्रोल रुममा निस्कने वित्तिकै प्रविधिक दाजुले फोन आयो तिम्रो भनेर फोन दिए । उनैको आवाज सुनें । मेरो समाचार सुनेर फोन गरेकी रहिछन् ।
”गज्जब संग समाचार भन्दो रैछौ नि ! तिमी त टिभीमा हुनुपर्ने । संगै समाचार पढ्न पाए कस्तो मज्जा हुन्थ्यो ।” उनले फुक्र्याइन् कि के गरिन् खै तर म दंग परें ।
”अनि कताबाट आज सम्झिनुभो नि ।”
”तिमीसंग भेट्न मन लाग्यो नि त ।” अनि हांसिन् ।
”यस्तो जोशिलो मान्छे राम्रो मान्छेलाई केटीहरुले फोन गर्दैनन् त !” जिस्क्याइन् ।
तर कता कता कस्तो कस्तो लाग्यो । त्यस्तो गम्भीर लागेको मान्छे त्यसमाथि म भन्दा उमेरमा र अनुभवमा पनि त्यति खारिएकी मान्छेले त्यसो भन्दा मनमा अलिकति चिसो परेजस्तो भयो । एकछिन चुप रहीन् । म पनि बोलिनं । के भनूं के भनूं भयो ।
अनि झट्ट भनिन् ”आज के गर्छौ मलाई नभेट्ने?” मेरै उमेरकी केटीले सोधेजस्तो लाग्यो ।
”केहि गर्दिनं । आज विदा हो । साथीको काम परेर म सट्टामा आएको । अब जान्छु ।”
”घर ।” मैले भने ।
”मेरोमा आऊ न । कहिलेकाहीं त साथीहरुकोमा पनि जानुपर्छ नि । मेरो पनि छुट्टी हो आज ।”
एकछिन अलमलिएं । कुनै केटी मान्छेले आफ्नोमा बोलाएकै पहिलो पटक म नअलमलिने कुरै भएन । त्यसमाथि म कहिल्यै साथीहरुको घर या कोठामा जान्न थिएं । मेरोमा पनि साथीहरु कमै आउंथे आउंदै आउंदैनथे भन्दा नि हुन्छ । त्यस्तो खासै कारण त हैन । तर त्यो दिन मेरो अरु काम पनि थिएन । घर गएर के गर्ने जाने विचार गरें उनकोमा । अलिकति संकोच त छंदैथियो । हुन्छ भनें । तर कहां उनले तिनकुनेको केएफसी अगाडि आउन भनीन् ।
मान्छेहरुबीच कतिबेला कसरी कस्तो सम्बन्ध बन्छ भन्ने पत्तो हुंदैन । कति मान्छे सधैं भेट भएर पनि नजिक हुंन सक्दैनन् । तर कसैसंग नजिक हुन भेटसम्म पनि हुनुपर्दैन । उनैसंग जोडेर हेरुंन एउटा फ्यानको रुपमा मैले कुरा सुरु गर्नु मात्र पर्यो त्यो पनि संयोगले भेट्दा र त्यो दिन घरमै… होइन कोठामा भेट्न बोलाइन् । नाता साइनो केहि होइन । उनले मलाई रुपेश भनेर सम्बोधन गरिन् मैले केहि भनिनं तपाई तपाई भनेर मात्र कुरा गरें उमेरमा जेठी लागेपनि मलाई दिदी भन्न आएन । बबरमहलबाट तीनकुने पुगुन्जेल मनमा अनौठो कौतुहल खेलीरह्यो ।
किन कोठामै बोलाउनु परेको होला बाहिर भेट्दा नि भैहाल्थ्यो नि । आऽऽऽ दिदी उमेरको मान्छेसंग जहां भेटे नि एउटै त हो नि । फेरि उनले पनि भाई जस्तै सम्झेर त बोलाएको होला नि । तर पनि आज सम्म म त्यसरी कसैकोमा गएको थिइनं । तर अर्कोतिर टिभीमा काम गर्ने मान्छेले बोलाएको सम्झेर म दंग परें । प्रभाव त राम्रै पारेको रहेछु जस्तो लाग्यो ।
तीनकुनेमा गाडिबाट झरेर पैसा तीर्दै मात्र थिएं पछाडिबाट कुसैले कम्मरमा दुई हातले च्याप्प समायो म बुरुक्क उपि्रुएं । आत्तिएर पछाडि फर्केर हेरेको त उनै रहिछन् । टम्म मिलेका सेता चम्किला दन्तलहर देखाएर मस्त हांसिन् । मलाई भने खुब अप्ठेरो लाग्यो । नुहाएर सुकिनसकेको लामो कालो कपाल घुंडा मुनीसम्म वन पीस अनि घर बस्दा लगाउने जुत्ता लाएकी उनी अर्कै चमकसित मेरो सामू प्रकट भइन् ।
”हेरीमात्रै रहने कि जाने पनि ?”
जाने हो भन्दै उनीसंगै अघि बढें । केएफसी कै बायांपट्टिको सानो बाटोबाट झण्डै सय मिटर भित्र एउटा ५ तल्ले घरको दुइटा मात्र कोठा बांकी कौशी निस्केको पाचौं तल्लामा बस्दीरहिछन् । माथि एउटी मेरै उमेरकी गोरी केटी ह्वाइट हाउसको युनीफर्म लगाएर कलेज जान तयार भएर बसेकी थिइन् । अनुहार र शरिरको बनोट झण्डै उनैको जस्तॊ । राम्री पनि तर म उनीजत्तिको लागेन ।
”सीज माई सीस्टर् आकृति । ऊ चाहिँ रुपेश बिहान न्युज सुन्याथ्यौं नि !”
”सो ही इज दी गाई ! हेल्लो ! ” आंखा सन्काउंदै उसले भनी ।
“हाई ” उसले के भनी कुन्नी मैले अभिवादन फर्काएं ।
“म गएं ल ! ह्याभ अ नाइस टाइम ।” भन्दै ऊ गई ।
४ वर्ष भएछ । उनले टिभीमा काम गर्न थालेको । रिपोर्टर भएर गएकी तर पछि समाचारवाचक भएकी । बाग्लुङ घर । काठमाण्डु बसेको ९ वर्ष । यो अवधिमा बहिनीलाई काठमाण्डुमा ५ वर्ष पालेकी । दुइवटा कोठा राम्रोसंग सजाइएको । मलाई लीभीङ कम बेड रुममा राखेर उनले अर्को कोठाबाट दुईजनालाई खाना ल्याइन् । कोठाको सजावट हेर्दै म खाना खान थालें । उनी घरी घरी मलाई र मैले हेर्दै गरेको दिशातीर हेर्दै खांदै थिइन् । सबै थोक जोडेकी रहिछन् । कुनामा सामसङको प्रुीज छेवैमा डिजीटल साउण्ड सिस्टम पलङसंगै जोडिएको टेबलमा कम्प्युटर कोठाको माझमा वरीपरी वेतका ६ वटा कुसर्ीको बीचमा ग्लासको टि टेबल । भीत्तामा कसैको फोटो टंागिएको थिएन बरु एउटा ठूलो पोट्रेटमा एउटी सुन्दर बालिकाको चित्र । सबै हुंदा हुंदै पनि कोठामा टिभी भने थिएन ।
“सो हाउज लाइफ ?” बीचमा उनले कुरा थालिन् ।
कोठा निरिक्षण गर्दै उसलाई हेर्दै नहेरी भनें “रमाइलो छ । तपाईलाई भेटेको दिनदेखि अझ रमाइलो ।”
“नो रिजन, बट आम फिलिङ सो !” मुस्काउंदै भने ।
“हाऊ कुड यु फील सो । म तिम्रो गलफ्रेण्ड भएं र ?”
कस्तो अचम्मको प्रतिक्रिया । रातो भएं म ।
“हैन तर पनि मैले रमाइलो अनुभव गर्न पाउनु मेरो स्वतन्त्रता हो !”
सहमतिको टाउको हल्लाइन् । म फेरि खानामा घोत्लिएं । उनी मलाई खाना खाउन्जेल हेरीरहेकी जस्तो लाग्यो ।
“मीडिया इज अल क्र्याप।” उनले खाना सकेपछि कुरा सुरु गरिन्। “देख्दा अर्कै भोग्दा अर्कै । अब एडिक्सन कसरी त्याग्नु जस्तो भको छ । कहां पाउनु रिह्याब सेन्टर फॆरि ।” असन्तुष्टीको पोको फुकाइन् । मैले अलिअलि बुझें । तर के बुझें पत्तो भएन ।
“मैले टिभी जोइन गर्दा तिमी जस्तै थिएं । संसार आफ्नो जस्तो लाग्थ्यो ।”
“अहिले पनि तपाईंकै त हो नि ! ”
“आफ्नै हुनु र आफ्नो जस्तो देखिनुमा फरक छ रुपेश ।”
“आफ्नो जस्तो देखिने कुरालाई आफ्नो बनाउन पनि त सकिन्छ नि !”
“होइन । त्यो भन्दा बरु पराईलाई आफ्नो बनाउन सकिन्छ ।”
“सबै आफ्नै हो भन्नेहरुले मात्र सफलता पाउंछन् ।”
“पर्दाभित्रको कथा बेग्लै हुन्छ । देयर आर न्युमेरस अनरिपार्टेड स्टोरिज वियोण्ड दि स्क्रिन ।”
म स्पष्ट भएं । जतिसुकै झकिझकाऊ देखिएपनि कांचका पर्दा भित्र पनि अनेकन अनरिपार्टेड स्टोरिज हुन्छन् । यो कुरा क्यान्टिनमा साथीहरुसंग बस्दा कैलेकाहीं निस्किने कुरा हो तर टेलिभीजन प्रतिको मोह भएको मलाई त्यसले कहिल्यै प्रभाव पारेको थिएन । ममा यो प्रभाव परुन्जेल उनको अनुहारको चमक बाहिर चर्केको घामको रापमा विलय भइसकेको थियो । बरु आंखामा निराशाको वायु मडारिन थालेको थियो । सायद यीनले कहिल्यै सन्तुष्टी नभोगेको हो कि जस्तो लाग्यो । ती अनरिपार्टेड स्टोरिजका बारेमा केहि त सुनेकै हो । उनकै मुखबाट सुन्नुपर्दा भने मेरो उत्साहमा कमी आउला भन्ने चिन्ता भयो ।
“मास्टर्स सकेको ४ वर्ष भयो । घरबाट विहे गर्नुपर्यो भनेर फोन आउंछ । तर मरो लागि बुवाआमाले केटा खोज्न सक्नुहुन्न ।” मलाई सुनाउनुपर्ने कुरा थियो र त्यो ? म पक्क परेर सुनीरहें ।
“यता मलाई मनपराउनेहरु छन् । तर तिनीहरु मलाई भन्दा मेरो पपुलारिटीलाई मेरो कलरलाई मनपराउनेहरु मात्र छन् । यो मलाई टिभीले दिएको उपहार हो ।”
मलाई कुरा सुन्दा अचम्म लाग्यो । यो कुनै समाचार भन्ने मान्छे भन्दा कहिल्यै लोग्ने नभएको विधवा आइमाइ जस्तो पो लाग्यो । तर त्यसो हुंदाहुदै पनि मलाई उनको माया लागेर आयो ।
“ह्याऽऽ म पनि के सुनाइरहेकी । भन न तिम्रो के छ फ्यानहरुको फोन कत्तिको आउंछ त ?” मुसुक्क हांसिन् । आंखामा फेरि तारा कुदे ।
म हांसी मात्र राखें । उनको अनुहार नियालेर । बायां पट्टिको गालामा कपाल झरेर छोपेको थियो । टाउको अलिकति दायांतिर ढल्काएर मतिर हेर्दै मुस्काइरहंदा मैले सोच्न सक्ने केहि बांकी रहेन । केहिबेरमा उनको अनुहारमा फेरि पहिलेकै जस्तो पतझरको नांगो रुख नाच्न थाल्यो ।
“पैसा त खुब कमाउनुहुन्छ होला है !” अनायासै सोध्न पुगें ।
“अं कमाउंछु तर तिम्रो जति खुशी किन्न सक्दिनं ।”
म फेरि अकमक्क परें ।
“किन ?” अनावश्यक सोधाई ।
उनको अनुहारमा अब नयां प्रकारको मुस्कान खेल्न थाल्यो । त्यो मुस्कानको अर्थ मैले बुझ्न सकिनं । मलाई तसा्रए जस्तो लाग्यो जिस्क्याए जस्तो लाग्यो तर उनी असन्तुष्टीको पहाड मतीर भत्काइरहिछे भन्ने कुरा मैले स्पष्ट बुझें ।
“मेरो कलर बिक्रीमा राखिएको छ कांचको पर्दामा ।”
“हजुर ?” मैले बुझिनं ।
“कैलेकाहीं म बेचींदैछु जस्तो लाग्छ यसैले मलाई दुखी बनाउंछ ।”
“किन बेच्न त तपाईले बेच्नुहुन्छ नि हैन र सेल्स पर्सन जस्तो !”
“हो त्यस्तै देखिन्छ तर..” अनुहारको रंग बदलीयो ।
“केहि होइन भैगो । चिया खान्छौ ?”
चिया खायौं तीन चार पटक नै होला । उनी घरी घरी जिस्किन्थीन् अनि मस्तसंग हांस्थिन् । यस्तो लाग्थ्यो उनी वर्षौंपछि यसरी हांस्दैथिन् । अनि एकै झट्कामा फेरि उस्तै सेलाउंथिन् असिनाले हिर्काएको गुलाफ जस्तै । म टिभीको बारेमा सोध्थें उनी निराशाका कुरा गर्दै टार्थिन् । म ती अनरिपोर्टेड स्टोरीजको बारेमा बुभुन खोज्थें उनी मलाई स्टोरी बनाएर मजा चाख्न खोज्थिन् । रमाइला कुरा भए गम्भीर कुरा भए कति ठाउंमा म अलमलिएं कति ठाउंमा उनले अलमल्याइन् ।
दिउंसो ३ बजेतिर उनले मलाई तीनकुनेको बसस्टपमा छोडिन् ।
घर पुगुन्जेल उनीसंग भएको कुराकानीलाई केलाएं । मिडिया इज अल क््रयाप एडिक्सन आफ्नो पराई पपुलारिटी कलर पर्दाभित्रको कथा अनि अनरिपोर्टेड स्टोरीज ।
पर्दा भनेको पर्दा हो त्यो रेशमी कपडाको होस् या कांचको होस् । पर्दा जतिसुकै पारदर्शी भएपनि त्यसपछाडि केहि न केहि लुकेकै हुन्छ । लुक्नुको अर्थ दृश्यमा नदेखिनु स्पर्शको पहुंचमा नहुनु गुण र दोषको पहिचान नहुनु आदि जे पनि हुन सक्छ । हामी पर्दाका रंगीचङ्गी नृत्य नाटिकामा खुबै रमाउंछौं पर्दा पछाडिको रुखो वाटिकामा कमै रमाउंछौं । कांचका पर्दाभित्रका ती अनरिपार्टेड स्टोरीज रिपार्ट गर्ने रिपोर्टरहरु स्टोरीको साथमा पर्दामा आउन सक्दैनन् । सक्लान् त उनले भनेजस्तै उनीहरु स्टोरी रिपार्ट नगर्दै बिक्री हुने हुन् कि ! उनले किन्न नसकेको खुशी अविछिन्न रिपोर्ट गर्नेहरुको आफ्नै कथा पो हुन् कि !
भेटघाट त्यही भेटमा अल्झियो ।
एकचोटि धेरै समय करिब ६-७ महिनापछि मैले उनलाई फोन गरें । उनले अचम्म मानेकी हुन् कि अचम्म मानेको जस्तो गरेकी हुन् तर म केहिबेर अत्तालिएं । त्यो दिन फोनमा मलाई उनले एकदम गाली गरिन् किन नभेटेको फोन किन नगरेको भनेर । तर भेट्न बोलाइनन् । थाहा छैन किन । फोन राख्नुअघि उनले “आम मीसीङ यु!” भनेर फोन राखिन् । म चकित परें, के खालकी हुन् भनेर ! तीनको अनरिपोर्टेड स्टोरीको मिस्ट्रीबारेमा मनमा फेरि खुल्दुली भयो ।
त्यसपछि न मैले उनलाई पुतलीसडकको साइबरमा भेटें न उनले मलाई भेट्न कोठामा बोलाइन् ।
त्यसको ३ महिनापछि उनी कांचका पर्दाभित्र देखीन छोडीन् । फोन गर्दा फोन लागेन । कोठा छोडीसकिछन् ।
तर मैले समयको गति छाड्न सकिनं म पछारीइनं पनि म हराइनं पनि । एक वर्ष भयो मैले रेडियो छोडेर टिभीमा समाचार भन्न थालेको । रमाइलो छ । उत्साह त्यस्तै छ । तर समयसंगै िहंडेजस्तो लागेपनि पछारिने या हराउने डर मान्छेमा कहिल्यै मेटिन्नं । म बेला बेला उनलाई सम्झिन्छु उनले भनेका ती अनरिपोर्टेड स्टोरीजका बारेमा सोच्छु ।
यो क्युवीकल क्यावीन भित्र सबैजना आ-आफ्ना कम्प्युटरमा चुपचाप काम गरिरहेका छन् । कोहि च्याटमा मस्त छन् कोहि रिपोर्ट लेख्नमा व्यस्त छन् कोहि उंघीरहेका छन् । पल्लो पट्टीको क्यावीनमा कोहि उत्ताउला गफगाफमा गफ्फीरहेका छन् । माथि हाकिमको कोठा भित्रबाट लक गरिएको छ । बाहिर गेटमा गार्ड हाई अलर्ट पोजीसनमा छ । म भने सम्झिरहेको छु “पर्दाभित्रको कथा बेग्लै हुन्छ । देयर आर न्युमेरस अनरिपार्टेड स्टोरिज वियोण्ड दि स्क्रिन ।”
म केहिबेरमा एअर हुने तरखरमा छु उनका अव्यक्त अनरिपोर्टेड स्टारीज र मेरा अनरिपोर्टेड स्टोरीजलाई दिमागी सन्तुलनमा मर्ज गराउंदै म एयरतिर लाग्छु ।
This entry was posted in BHAKKANO; the reality, In Nepali and tagged कथा, experience, journal, life, Media, mystery, report, silver screen, Story, Thoughts. Bookmark the permalink.
12 responses to “काँचका पर्दाभित्र अनरिपोर्टेड स्टोरीज”	silviya says:	April 25, 2012 at 6:55 PM	उहाँको नाम जान्न इच्छुक छु र केही “अनरिपोर्टेड स्टोरेज ” पनि।तर अचम्म लाग्यो उहाँ पर्दामा नदेखिएको भन्दा।बट ब्यूटीफूल स्टोरी नाइसली एग्जीकिउटेड,सारै मनपर्यो ।सरल भाषामा लेखिएकाले होला बुझ्न पनि सहजनै भयो।
Reply	roopess says:	April 27, 2012 at 10:05 AM	सिल्भी जी! कथाका कतिपय कुरा काल्पनिक छन्। जस्तो कि पात्र। भोगाइ र अनुभव चाहिं सत्य हुन् भन्दा फरक नपर्ला। प्रतिक्रियाको लागि तपाई लगायत सबै साथीलाई धन्यवाद।
Reply	Ashank Upadhyaya says:	October 26, 2009 at 12:20 AM	sachchai ramailo ani antyahin katha sunaunu vayo
asha chh yo kathalai feri ekfera baljhaunu hunechh ani uni ahile kaha ani k gardai chin tyo pani tapaikai lekhan saili le bataunechh .
ani sachchi deuta risayar uni hideki ta hainan
so sweet story and ur writing style
Reply	janak Poudyal says:	August 3, 2009 at 10:46 PM	maja lago yar…gazzab ko lekhnu bha raicha…aaja matra herne fursad milo ni ta…Ajhai lekhnos yar…
Reply	Saurav Dhakal says:	July 30, 2009 at 5:30 PM	great
Reply	shree krishna karki says:	July 30, 2009 at 1:46 PM	very well created well done…..
I know u r not the perfect writer tara there are some points words are broken unecessarily tht what i thought overall verytrue and very profound mystry …. transitional phage is gr8 …ani last ma chai I expected Namaskar ma rupesh shrestha kantipur samachar ma tapailai swagat cha…thts what i felt
but u did ery gr8 job. thnxfor posting it.
I still wanted to know who was the person and what mightbthe unreported stories………….
Reply	Kosh R says:	July 30, 2009 at 4:07 AM	Enjoyedalot..keep on posting similar other stuffs
Reply	saroj says:	July 28, 2009 at 4:46 PM	Sachhai dherai ramro6rupesh,
Reply	Dhaiba says:	July 27, 2009 at 4:22 PM	“कति मान्छे सधैं भेट भएर पनि नजिक हुंन सक्दैनन् । तर कसैसंग नजिक हुन भेटसम्म पनि हुनुपर्दैन ।”
It touched my heart. Ya, there is stores in every profession. That was unreported n will be. We exchange our happy moments to our profession. Your story says that that is not real whatever seems . Thanks.
Waiting for other unreported stories…..
Reply	ramesh says:	July 27, 2009 at 12:30 AM	man paryo !
Reply	आकार says:	July 27, 2009 at 12:28 AM	अनरिपार्टेड स्टोरिज के थियो पत्ता त लगाउनुभयो होला नि ! कथा निकै गज्जब छ, साँच्चै उनी चाँही को थिइन ?
Reply	वसन्त says:	July 22, 2009 at 1:50 PM	खुब मन प-यो यो कथा! केहि ‘अनरिपोर्टेड स्टारीज’ पनि यसैगरी कथाकै माध्यमबाट पढ्न पाईने आशा गरेको छु।